7 लागि परिणाम shin chan
Crayon shinchan बम
जीत Crayon Shinchan मद्दत war.It नै आफ्नो तर yours.It आफ्नो destiny.You, यो सामना र यसलाई पिट्न मा end.Come मा यो जीत आवश्यक छ!
तिघ्रा चान Jewels साहसिक
शिन चान एक स्तर पारित गर्न सबै Jewels सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। आफ्नो दिमाग प्रयोग र ती सबै स्तर समाप्त!
तिघ्रा चान3खेल
नयाँ साहसिक खेल मा शिन चान। थप अंक प्राप्त गर्न स्तर र lollipops धेरै खाली गर्न सबै milkshakes सङ्कलन। चोट गर्न सक्ने you.Shin चान3खेल धेरै जनावर होसियार हुनुहोस्
तिघ्रा चान ट्रांसफर्मर
यो रमाइलो साहसिक मा, शिन चान विभिन्न जनावर मा परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। यो मंच को स्तर पिट्न यो प्रयोग गर्नुहोस्। आक्रमण र K हाम फाल्ने गर्न जे सार्न प्रेस ई।
ओहो मेरो तिघ्रा
तपाईं समातिनु र कुइरो लागेको गरेर कुटपिट प्राप्त, सुस्त गर्न चाहँदैनन् भने आफ्नो बाटो र पानी पैच को बीचमा राखिएको यस डिब्बे मा बम्प बस जोगिन !! सावधान हुनुहोस्, सवारी र सबै सुरक्षित गरिब शिन माथि आनन्द
आफ्नो मनपर्ने खेल Weirdo प्ले यो क्रिसमस सिजन मा। प्रत्येक स्तर पूरा गर्न आफ्नो तोप संग weirdo गोली। उच्च अंक स्कोर तारा सङ्कलन। एक प्रमुदित क्रिसमस छ!
तपाईं Spongebob को साथीहरूसँग एउटा मिशन पूरा गर्नुपर्छ एक स्नान को किनारा, यसको कार्य पूरा गर्न र अर्को चरण मा सार्न प्राप्त गर्न सबैभन्दा octopuses प्राप्त गर्न तयार हुन
भूत आक्रमण स्कूबी डू
स्कूबी डू नरक देखि चलिरहेको, तर अझै पनि स्कूबी डू फिर्ता फसाउन भूत chasing, कृपया मद्दत स्कूबी डू स्की बाटोमा सबै अवरोध पार र वस्तुहरू बाटो मा हो सङ्कलन। भाग्यले साथ दिओस्!
साहसिक समय अचम्मको दौड
खुसी देशमा फिन र जेक साहसिक, तिनीहरूलाई way.Flinn मा obsters विदेशी देशमा एउटा रोमाञ्चक दौड भाग जोगिन मदत। दौड मा Flinn राक्षस को खतरा सामना थियो भन्ने अवरोध हटाउन। Flinn मा कायापलट
ओसामा बिन लादेन मार्न
आतंककारीहरूले Snipe र बाहिर ले ओसामा बिन लादेन। मृत भएपछि, उनको टाउको सरकार गर्न प्रमाण लागि बन्द काटे।
F1 कार रेसिङ
लक्षित दूरी पुग्न आफ्नो कार ड्राइभ। अन्य कार संग टकराने नगर्नुहोस्। आफ्नो कारको स्वास्थ्य मा एक आँखा राख्नुहोस्।
Patrick भूत जहाज
पैट्रिक पुरानो जहाज मा Spongebob पाउन मद्दत गर्नुहोस्।